नेपाल आज | विदेशीको पैशा खाएर राजालाई गाली गर्ने हक कसैलाई छैन (भिडियोसहित)
विदेशीको पैशा खाएर राजालाई गाली गर्ने हक कसैलाई छैन (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, ०७ कार्तिक २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
समा बुद्धिजीवीहरु पनि छन् । उनीहरुको लागि पनि अहिलेको मौसम अनूकुल बनेको छ । एउटा ट्याम्पोलाई ट्रक तान्न लगायो भने तानिन्छ ? तानिदैन । हो त्यस्तै हो । अहिलेको संविधान भनेको ट्याम्पो हो । यसले मुलुक धान्न तान्न सक्दैन । मुलुक धान्न र तान्न नसक्ने संविधान जारी भएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीहरुले बजेट जारी गर्छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत त विदेशीको भर, राजश्व उठाउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हुन्छ ।
नेपाललाई चाहिएको राजनीति नेताहरुले गरेको भए ५०–६० जना सांसदले हाम्रो संसद चल्न सक्छ । पश्चिमाहरुले कुनै बदलाको लागि नेपालमा थोपरेको व्यवस्था हो यो । अहिलेको व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था होइन । नेपाली जनताले झन्डै हजारको हाराहारीमा सांसद पाल्छौ भनेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेदेखि नै नेपाल उनीहरुको सत्रु राष्ट्र बन्दै आएको छ । यसकारण उनीहरु जहिले पनि हामीलाई बिथोल्न चाहन्छन् । अहिलेको परिवेश भन्ने हो भने त्यो सम्भव पनि भयो । संघीयता थोपरिएको हो ।संघीयता नभएर देश अविकसित भएको होइन । ७५ जिल्लाको विकास गर्ने पैशा त यिनै नेताहरुले थुपारेर राखेका छन् । यिनको कठालो समातेर सोधौं त पैशा कहाँबाट आयो भनेर । सबै थाहा हुन्छ । संघीयताका लागि मुलुक अगाडि बढिसक्यो । तर धान्न नसक्ने व्यवस्थातिर गयो । अहिले जुनसुकै बच्चा जन्मियोस, जन्मनासाथ उसको थाप्लोमा १४ हजार ऋण हुन्छ ।
Gyanendra Shah Prem Singh Basnyat डा. प्रेमसिंह बस्न्यात स्ट्रेट फरवार्ड